Kitaabka Quduuska ah ayaa shaaca ka qaaday geesta | Apg29
Ka gees ah waa la aqoonsaday by saddex inkiraadda.
Waxaa jiray hadalheynta badan oo ku saabsan kuwa ka geesta ah waa, laakiin Kitaabka Quduuska ah wuxuu si cad u qeexayaa qofka uu yahay. Just akhriyey ka hor!
Kitaabku waxa uu si cad u qeexayaa kan ka geesta ah waa
Waxaan rumeysanahay in ay jirto jahwareer ka taagan, kuwaas oo ka geesta ah waa. Laakiin Kitaabka Quduuska ah si cad u qeexayaa ka geesta ah, taas oo aad ka arki in afartaas aayadaha Bible:
1 John 2:18. Carruurta Gacaliye, hadda waa wakhtigii la soo dhaafay. Oo sidii waad maqasheen in ka geesta ahi imanayo , weliba Tagtay imminka kuwa badan oo u imid. Laga soo bilaabo tan waxaan fahamsanahay in ay tahay markii ugu danbeysay.
1 John 2:22. Yaa waa beenaaleh, laakiin kii oo beenisay in Ciise yahay Masiixa ? Waa kan Masiixa ka geesta kuwaas oo beenisay Aabbaha iyo Wiilka. 23. Qof kasta oo Wiilka beenisay ma Aabbuhu leeyahay. Ku alla kii qirta Wiilka sidoo kale Aabbuhu leeyahay.
1 Yooxanaa 4: 3. Laakiin ruux walba oo uusan ka qiratid in Ciise Masiix jidh ku yimid, ma aha Ilaah. Waxaa waa ka geesta ah , kuwaas oo aad maqashay oo soo socda, oo hadda waa horeba ee dunida.
2 John 1: 7-dii Waayo, khaa'inno badan baa dunida u soo baxay, kuwaas oo galay aan qiran in Ciise Masiix jidh ku yimid . Kaasi waa khaa'inka iyo ku Masiixa ka geesta .
Ka gees ah ayaa saddex inkiraadda
Ka gees ah oo beenisay in Ciise yahay Masiixa.
Ka gees ah oo beenisay in Ciise yahay Wiilka Ilaah.
Ka gees ah oo beenisay in Ciise Masiix uu noqday nin run.
Kii saddexdan inkiraadda waa kan Masiixa ka geesta. Sayidka, Kitaabka Quduuska ah ee Qorniinka kuwan shaaca ka qaaday, kuwaas oo ka geesta ah waa.